Ukutyelela iGriffith Observatory Los Angeles
Eunited States California Ilos Angeles
I-Griffith Observatory ibonisa iimbonakalo ezihambelana nendawo, iinkqubo zeenkwenkwezi kwiplanariyamu kunye nezinye zeembono ezigqibeleleyo zedolophu eLos Angeles. Umboniso ufumana amanqaku aphakamileyo kwiindawo ezininzi zokutyelela.
Ababhenkethi abaphonononga i-online inthanethi bayinika amanqaku aphezulu kakhulu. Imiboniso yesayensi kunye nemibukiso yeeplanarium zikhulu. Ukungena kwamahhala kwenza ukuba kufinyeleleke kuwo wonke umntu.
Nangona awukho kwindawo engaphandle okanye isayensi, i-Griffith Observatory yindawo yokuya kwiimbono ezibukisayo zeDowntown LA ne-Hollywood Sign.
Iqela elincinci labahlaziyili lithi lithandeka. Kwabo, nokuba nemibono ayanele. Kungaba okufanayo kuwe.
Abanye bakhononda ngezihlwele kwaye bafumana indawo yokupaka ngosuku oluxakekileyo okanye ngokuhlwa. Enyanisweni, isithuthi esikhulu isizathu sokuba ungahambi. Abahlali ngamanye amaxesha bayeka ukukhungatheka kwimida ende yeemoto ezikhuphisana nazo zonke izithuba zokupaka. Ukuba awunayo umonde okanye ixesha, ungase ufune ukuwuqhawula kwaye ukhuphe ukukhungatheka.
Imiboniso iquka iinkcukacha ezonwabileyo kunye nesayensi enomdla. Ukuthatha ixesha lokumisa nokuqonda umboniso omncinci omnye (njengegumbi lefu) unokunokwenza lo mhla we-geek usuku lwesayensi.
Kwinqanaba elingaphambili, unokufumana iimpendulo kuyo yonke loo mibuzo enzima: kutheni inyanga idlulile, yintoni ebangela ukucwiliswa okanye indlela i-tide ifom. Banoba neqhekeza lenyanga. Ungakwazi kwakhona ukuya kwi-planetarium show kwaye ukhangelelanise ngeeselesiko.
Ngaphandle, unokuchitha ixesha ukuzonwabisa ngezinto ezimangalisayo zedolophu ejikelezile. Hamba phezulu uze ujikeleze igalari yangaphandle ukuze ubone bonke. Unayo i-cafe, ukuba kukho konke okukwenza ulambile.
Iingcebiso zeGriffith Observatory
Ukungena kwiGriffith Observatory kukhululekile.
Kufuneka uthenge amathikithi kwi-showarium show. Zathengiswa kuphela kwi-observatory kwaye zithengisa kusasa. Abantwana abaneminyaka eyi-13 ubudala nangaphezulu bahlawula amaxabiso omdala. Ukuba umntwana wakho usemncinci kunoko kodwa ebukeka ekhulile, ngenise into ebonisa ubungakanani bakhe. Okanye ulethe i-ID yomfundi ukuze uthole inani elincinci.
Abantu abaninzi baye balahlekelwa iiplothi zeeplanethi ezibhalwe kwicala elingasemva, kodwa ziyindlela efanelekileyo yokufumana ubungakanani bayizikhulu ze-cosmic.
Ukuba ufika khona emva kwemini-ntambama, unamathela ukujonga ukukhanya kwelanga kunye nezibane zedolophu.
Ngexesha leveki ezixakekileyo zeeholide, khangela i-website ye-observatory ukuze ubone ukuba baqhuba iibhasi ezongezelelweyo.
Ukuba ufuna ukuqhubela phambili, thabatha iVermont Ave kunye neVermont Canyon Road ukuba ufike khona esikhundleni seFern Dell / Western Canyon (eyona ndlela i-GPS ingayiphakamisa).
Ukuba unesimo esifanelekileyo, kunokuba lula ukuba ufike kwindawo yokuhlola ngokuhamba ngeWest Observatory Trail. Fumana indlela apha. Ukunyuka kweekhilomitha ezingama-2 kunye nenzuzo yokuphakama kweenyawo ezi-580, kwindlela elula yokulandela umlilo.
Umboniso weGriffith Observatory planetarium awuklanyelwe abantwana abancinci. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emihlanu ubudala bavunyelwa kuphela kwimiboniso yokuqala yosuku.
I-Griffith Observatory ivulekile emva kobumnyama, kwaye unokufumana imibono emihle yedolophu evela ngaphandle. Yenza izambatho ezingaphezulu xa uphahla kakhulu.
Ukuba ufuna ukuthabatha iifoto, ungasebenzisa i-tripod eqondayo, kodwa akukho nanye ifowuni. Funda izikhokelo zabo.
I-Griffith Observatory ihlala ibamba iMicimbi yeNkwenkwezi ekhethekileyo kunye nezinye iziganeko ezidweliswe kwiwebhusayithi yazo.
IGriffith Observatory kwiimifanekiso
I-Griffith Observatory ibonakale kwiifilimi ezininzi, kodwa mhlawumbi inxaxheba yayo engakukhunjulwa yayikuphela kokuphela kweRebel ngaphandle kwesizathu . Ezinye iikhredithi zefilimu zeGriffith Observatory ziquka abaguquleli , ifilimu ye- Terminator ye-1984 kunye ne- Jurassic Park .
Iwebhusayithi yeGriffith Observatory
I-Griffith Observatory eseGriffith Park. Unako ukufikelela kuyo ngokusebenzisa iingeniso zeVermont okanye zeDern Dell. Ipaki kwindawo yokupaka i-Griffith Observatory okanye kwizitrato eziseduze. Jonga iingcebiso ezingentla ngentla yeendlela ezithathayo xa izitalato zixakekile. Ingeno likaFern Dell ivala emnyama - emva koko, sebenzisa iVermont.
Ekuqaleni kuka-2017, iSixeko saseLos Angeles saqalisa imithetho emisha yokupaka kunye nokulawulwa kwezithuthi kwindawo yokugcina. Imirhumo yokupakisha yokupaka yonke indawo yokupaka kwinqanaba lokujonga kunye neendlela ezikufuphi.
Uya kufumana izitishi zokuhlawula ezikufutshane ezithatha imali kunye namakhadi ekwereta.
Imirhumo yokupaka inceda ukuhlawula inkonzo yenkonzo ebhasi ekwandisiweyo. I-DASH Iibhasi ze-Observatory zenza i-10 emise phakathi kwesiteshi seMetro Red Line iVermont / Sunset esiteshini kunye ne-Avenue yeWillhurst eLos Feliz, ukuyeka kwi-Greek Theatre kunye ne-Observatory. Eyona nto ibhetele, ixabiso liphantsi kwedola ngalinye ngomntu ngamnye.
Ukholo lweNtaba yeMagic Fest 2016
Abamelwane abaphezulu be-Up-and-Coming of Los Angeles
Iindawo ezihamba phambili zeBeverly Hills zeZiko lamaRoma
I-Universal Studios iHollywood Visitors Guide
I-Best Fusion Tacos eLos Angeles
Izinto ezili-8 zokwenza ngaphambi kokuba uhambe nge-Air
Iindawo zokutyela ezithandwa kakhulu kwi-San Juan
Uhlolo: I-Great Wolf Lodge Southern California
I-Albuquerque LGBT Guide
Jonga i-Thrombolites yamandulo yeClave Cove, eNewfoundland
I-Westminster yeKenki yeKlabathi Yonyaka Yonyaka
IPasiti yeParis yeTyelelo: ii-Fares, iiNzuzo kunye nendlela yokuSebenzisa ngayo
L'Antica Pizzeria da Michele: I-pizza ehamba phambili e-Naples
IiCabenic Jewel Cabins kunye neS Suites
Iindawo eziphosakeleyo zokutyelela eKolkata
Iindawo ezona ziHununted e-Atlanta
Iibhasi zaseTshayina ukusuka eNew York ukuya eBoston
I-Great Irish Fair eBrooklyn eConey Island